Iran: Bilaogera Mety Hiatrika Fiampangana ‘Fihantsiana Ady Amin’Andriamanitra’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2017 3:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, عربي, Italiano, বাংলা, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aogositra 2010 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Misy ny fitomboan'ny ahiahy fa mety ho voampanga amin'ny moharbeh (fihantsiana ady amin'Andriamanitra/ fankahalàna an'Andriamanitra) amin'ny fotoam-pitsarana ho avy i Shiva Nazar Ahari, mpikatroka ny zon'olombelona, bilaogera sady tonian-dahatsoratry ny tranonkalan'ny Komity ny Mpitati-baovao momba ny Zon'Olombelona ao Iran izay migadra any am-ponja
Mety hitarika sazy ho faty izany ao Iran.
Naneho ny ahiahiny momba ny fizotran'ny fitsarana manaraka ny mpisolovavan'i Shiva Nazar Ahari, Mohammad Sharif, mihevitra fa mety hisy ny fiampangana mavesatra momba ny moharebeh amin'ny raharahany.
Nosamborina tamin'ny 14 Jona 2009 tao amin'ny biraony i Nazar Ahari. Taorian'ny fanagadrana azy 102 andro, navotsotra tamin'ny 23 Septambra 2009 izy rehefa nandoa onitra 200.000 dolara. Nandany 33 andro tao amin'ny efitra mitokana tany am-ponja izy. Nosamborina fanindroany izy tamin'ny 20 desambra 2009 ary nogadraina tsy misy filazana sy tsy misy fanazavana avy amin'ny manampahefana mikasika ny antony hanagadrana azy.
Fantatra fa hotontosaina amin'ny 4 Septambra 2010 ny fotoam-pitsarana azy faharoa.
“Tsy hiala an'i Iran aho”
Ao anatin'ity sarimihetsika fohy mampiseho an'i Nazar Ahari taorian'ny famotsorana azy tany am-ponja ity, nilaza izy fa nanapa-kevitra hijanona ao Iran na inona na inona hitranga. Nilaza izy fa tsapany fa ao no toerana hisian'ny fiantraikany bebe kokoa amin'ny asany.
Ity sarin'i Nazar Ahari manao asa an-tsitrapo ho an'ny fikambanana manohana ireo ankizy eny an-dalambe sy ny ankizy miasa.
Bilagera Iraniana Arman Sabz nanoratra hoe:
Raha miantso azy ho fahavalon'Andriamanitra izy ireo, dia iza indray no manaraka … Indray andro dia hiantso antsika tahaka izany koa izy ireo … Raha manantena ianao fa hisy maherifo ho avy hanova ny anjarantsika, dia hitondra antsika sy ny namantsika any am-ponja izy ireo amin'ny farany.
Bilaogera hafa, Azad Bashim, nanoratra fa tandindonin-doza i Shiva, na dia tsy misy fototra aza ny fiampangana ary manohitra ny tsindry izy.